MK-677 (Ibutamoren) သည်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသလား။ Sarm ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [NEW]
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/MK-677 (Ibutamoren) သည်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသလား။ Sarm ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [NEW]
အပေါ် Posted 09 / 29 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
AASraw သည် MK677 အမှုန့် (Ibutamoren) ၏ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အဓိကကျသော mk 677 အကျိုးအမြတ်များအနက်တစ်ခုမှာကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းဖြစ်သည်။ MK 677 ဖြည့်စွက်ချက်သည် IGF-1 နှင့် GH အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်သုံးစွဲသူသည်အရွယ်အစားအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုသုတေသနနှင့်သိပ္ပံပညာဖြင့်ထောက်ခံခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများအရအထူးသဖြင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းချို့တဲ့သောသူများနှင့်အထူးသဖြင့်အသက် ၆၀ နှင့်အထက်လူကြီးများအတွက် mussle mass တိုးပွားလာသည်။ အသုံးပြုသူများထံမှ mk 60 ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအများကလည်းဤဆေးသည်ကြွက်သားတစ်သျှူးတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်ဟုဆိုသည်။
အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်လူရှစ်ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်တစ်ခုမှာ Ibutamoren mk 677 သည်ကြွက်သားတွေကိုလျော့ကျစေပြီးပရိုတင်းဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကဒီဆေးဟာတင်ပါးဆုံရိုးကျိုးနေတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာတွေကိုကြွက်သားသန်မာလာစေဖို့နဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ကာယဗလလေ့ကျင့်သူတိုင်းနီးပါးသည်အနာတရအားဖြင့်အားကစားရုံပြင်ပရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များစွာသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်သူ / သူမ၏တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့ကြောင်း ၀ န်ခံသည်။ သင်သည်အချိန်အများစုကိုအားကစားခန်းမ၌အမြဲတမ်းသုံးနေပါကထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုမလွှဲမရှောင်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကြောင့်ကြွက်သားထုထည်များလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေသောအရိုးများအပါအ ၀ င်သင်၏တစ်ရှူးများအားဖိအားများစွာပေးနိုင်သည်။
အများစုမှာအသုံးပြုသူများအ mk677 သူတို့ကိုကူညီဝန်ခံ အဆီဆုံးရှုံးမှုစွဲစေ။ Mk 677 အဆီဆုံးရှုံးမှုရလဒ်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် GH သည်သင့်အားအရေပြားနှင့် visceral အဆီနှစ်မျိုးလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဟော်မုန်းဖြစ်သောကြောင့်သင့်အားကြွက်သားထုထည်တိုးပွားစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Ibutamoren သည်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုအစီအစဉ်များတွင်အမြဲထည့်သွင်းထားသည်။
နောက်ထပ် MK 677 အကျိုးကျေးဇူးက ghrelin အဲဒီ receptor ကိုလှုံ့ဆျောနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါဖြစ်ပါသည် nootropic အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ NCBI မှထုတ်ဝေသောသုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဦး နှောက်၏လည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေရန်ယန္တရားနှစ်ခုကိုသွယ်ဝိုက်။ ကူညီနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများမှတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်အတွက်ကူညီပေးသော IGF-1 မြှင့်တင်ရန်တို့ပါဝင်သည်။ နှင့် REM အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်တိုးမြှင့်မှတဆင့်။ အိပ်စက်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောကြောင့်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Mk 677 သည် IGF-1၊ IGFBP-3 နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းများသောကလေးများတွင် cortisol, insulin prolactin, glucose တို့၏ပြင်းအားကိုမပြောင်းလဲစေဘဲကြီးထွားမှုဟော်မုန်းကိုတိုးစေသည်။ thyroxine (T4), thyrotropin သို့မဟုတ် triiodothyronine (T3).
Ibutamoren သည် GH ချို့တဲ့သောအမျိုးသားများအားအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ဂလူးကို့စ်နှင့်အင်ဆူလင်တို့သည်လည်းတိုးပွားလာသည်။
Ibutamoren လက်အောက်တွင်ရှိစဉ် Ghrelin Mimetic ဖြစ်သည့်အတွက်သင်သည်များများစားစားစားရန်မျှော်လင့်သင့်သည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်များအရ၎င်းသည်အကျိုးရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော mk 677 ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
Ibutamoren သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်ကောင်းကျိုးများကိုအားကောင်းစေသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ရာသီအလိုက်ရောဂါများနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းများကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်ဝေးဝေးနေရန်စွမ်းရည်သည်အလွန်တိုးတက်လာသည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ဖြင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောဘဝမျိုးဖြင့်သင်စတင်နေထိုင်ပါလိမ့်မည်။
သံသရာ ၁: အကောင်းဆုံး MK 1 (Ibutamoren) အမှုန့်များရရှိရန်သင်ပထမ ၁၁ ပတ်အတွက် ၂၄ နာရီလျှင် ၁၀ မီလီဂရမ်နှင့်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၁၂ နာရီဝန်းကျင်တွင် ၂၄ နာရီတစ်နာရီလျှင် ၂၀-၂၅ မီလီဂရမ်အထိမထည့်မီ။th အပတ်က။ ဒီအနှုတ်သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်တို့ကတစ်အရည်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
သံသရာ ၂ - ၂၄ နာရီလျှင် ၁၅ မီလီဂရမ်ဖြင့်စတင်ပြီး ၁၂ ပတ်ကျော်လွန်ပြီး MK2သံသရာအရှည်ကိုတိုးနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ pituitary gland သို့မဟုတ်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
သံသရာ ၃ - သံသရာမှထွက်လာသောခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ MK3သောက်သုံးမှုကိုတစ်နေ့လျှင် ၅၀ မီလီဂရမ်အထိတိုးချဲ့ရန်နှင့် ၈ ပတ်ကြာ MK 677 သံသရာအရှည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ရွေးချယ်သည်။
သံသရာ ၄: သင်ကြွက်သားများတည်ဆောက်လိုပါကအသုံးပြုသူများသည် ၂၄ နာရီလျှင် ၃၀ မီလီဂရမ် Ibutamoren သောက်သုံးရန်အကြံပြုသည်။
သံသရာ ၅။ မင်းရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကအဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ အတွေ့အကြုံရှိသူများစွာက ၂၄ နာရီမှာ 5mg ကိုသောက်ဖို့အကြံပြုကြတယ်။
သံသရာ ၆။ သင်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာဒဏ်ရာများကိုကုသရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါကတစ်နေ့လျှင် ၁၀-၂၀mgmg MK6သောက်သုံးရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
သတင်းကောင်းကတော့ mk 677 အတွက် PCT (Post Cycle Therapy) လိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့်ဟော်မုန်းကိုမှမ ၀ င်ရောက်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများထံမှကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်အစီရင်ခံစာများအရ ၂၀ မှ ၃၀ မီလီဂရမ်သည်အမြင့်ဆုံး MK 20 သောက်သုံးသောဆေးဖြစ်သည်။ အချို့သောသုံးစွဲသူများသည်တစ်နေ့လျှင် ibutamoren ၃၀ မီလီဂရမ်ထက်ပိုမိုသောသောက်သုံးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြသော်လည်းရလဒ်ကောင်းများမရရှိနိုင်ပါ။ MK 30 သံသရာအရှည်သည် ibutamoren သောက်သုံးမှုထက် ပို၍ အရေးကြီးကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
ibutamoren သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအသစ်ပြုလုပ်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် FDA ကအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် mk ၆၇၇ ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းဝန်ခံသောခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းမှကျွမ်းကျင်သောခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများကစမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိရောက်မှုရှိကြောင်းကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်များကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာခဲ့သည်။
Ibutamoren သည်မကြာသေးမီကကာယဗလတည်ဆောက်ခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ Mk677 nutrobal ကိုကြွက်သားတည်ဆောက်မှုတွင်အလွန်အကျွံအသုံးပြုနေခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ GH အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုတွင်ပါဝင်သူတိုင်းသည်အငယ်ဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းများသည်အလွန်အကုန်အကျများသောကြောင့် Nutrabol မှအပကြီးထွားမှုဟော်မုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အခြားအိတ်ကပ်နှင့်အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းများမရှိပါ။ Mk 677 သည်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းသက်သာသည် HGH (လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း) နှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
Nutrobal သည်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေကြောင်းသိရန်လည်းအရေးကြီးသည် SARMs။ တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောသာဓက S23, MK-677 ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပြီး, RAD140 (Testolone) အမှုန့်.
Janssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. Skeletal ကြွက်သားထုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ၁၈-၈၈ နှစ်ရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ၄၆၈ ယောက်။ J ကို Apple က Physiol ။ 468; 18: 88-2000
Adunsky အေ, Chandler ဂျေ, Heyden N. , Lutkiewicz ဂျေ, Scott BB, Berd Y. ။ ။ ။ Papanicolaou DA (2011) ။ တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းမှပြန်လည်နာလန်ထူသောလူနာများကုသမှုအတွက် MK-0677 (ibutamoren mesylate) - multicenter၊ ကျပန်း၊ Gerontology နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊ ၅၃ (၂)၊ ၁၈၃-၁၈၉ ။
1782 Views စာ
7 ၏စျေးကွက်အတွက် 2021 အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)